/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/Oxymetholone ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: Oxymetholone ၏ Ultimate လမ်းညွှန် (Anadrol)
အပေါ် Posted 01 / 08 / 2019 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
ဒါဟာကာယဗလတဦးတည်းသို့မိမိကိုယ်ကိုပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်ကြောင်းခက်ခဲအကြမ်းတမ်းဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျကိုအဘယ်သူမျှမအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ျာထုတ်ကုန်, လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အစားအသောက်နှင့်အတူမှန်ကန်စွာပြုသောအမှုလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကနှစ်ဆဝေမျှအတွက်တဦးတည်းဆု။ အများကြီးစဉ်းစားလေ့အဖြစ်အဖြစ်မှန်မှာတော့တစ်ဦးတည်းအလေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးရုတ်သိမ်းရေးသင်သည်သင်၏စံပြရလဒ်များကိုမပေးနိုငျသညျ။ Oxymetholone (Anadrol) သင်ကသင်၏အသက်တာအတွက်စိတ်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုအောင်သင့်ရဲ့ကာယဗလခရီးအသွင်ပြောင်းဖို့အသုံးပွုနိုငျသောထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။
နောက်တစ်ခုကတော့ Testosterone လိုခန္ဓာကိုယ်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုဟာအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှလျော့ကျသွားပြီး၎င်းရဲ့ဒြပ်ထုပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပဲကျန်တော့တာပါပဲ။ အဆုံးစွန်သောထက်။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်တိုးတက်မှုကိုမြင်စေရုံသာမကအရေးအကြီးဆုံးမှာဤခရီးစဉ်တွင်သင့်အားစိန်ခေါ်နိုင်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်းပြင်မြင့်ကိုကျော်လွှားစေလိမ့်မည်။
သင်တစ်ဦးထူးဆန်းသောကာယဗလလူနေမှုပုံစံစတဲ့အသကျရှငျဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်ကသိသိသာသာသင့်ရဲ့ကြွက်သားထုထည်နှင့်ခွန်အားကိုတိုးမြှင့်ရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Anadrol ယူသင့်၏။ ယခုအားဖြင့်သင်တို့ကို Oxymetholone (Anadrol) အကြောင်းပိုမိုသိလိုစေခြင်းငှါ, (434-07-1)။ သင်တစ်ဦးတစ်မိနစ်အတွင်းကအကြောင်းအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုရပါလိမ့်မယ်။
AASraw သည်အရည်အသွေးမြင့် anadrol (Oxymetholone) အမှုန့်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Oxymetholone (Anadrol) ကဘာလဲ?
Oxymetholone အလွန်လူသိများဟိုအန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်သည့် Anadrol 50 များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ "50" နည်းလမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောငျးဆို? ဒါဟာ Steroid တစ်မျိုးမှာ dosed သောမီလီဂရမ်ပြသထားတယ်။ ဤတွင် Anadrol များအတွက်အခြားအမှတ်တံဆိပ်အမည်များတချို့ရှိနေပါတယ်;
အဆိုပါ 1960s တချို့ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများက Anadrol တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေက Zoltan, Syntex နှင့်ပန်းခြံ Davis ကပါဝင်သည်။ အတိတ်ကာလက, သွေးအားနည်းရောဂါခံစားနေရပြီးသူလူစုကိုသွေးနီဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအစ, အရိုးတို့ကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ကြွက်သားဖြုန်းဝေဒနာတွေချွတ်တိုက်ခိုက်နေအတွက်ကူညီရန်, အစာစားချင်စိတ်ကိုတိုးပွါးစေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သုံးဆယ်ပတ် AIDS ရောဂါနှင့်ဘယ်သူ၏အလောင်းကောင်ကြွက်သား, လေလွတဆင့်သွားနေသောလူနာအပေါ်ထိုကာလအတွင်းမှာအမှုကိုပြုလေ့လာမှုတစ်ခုကဒီ Steroid တစ်မျိုးလေ့လာမှု၏ကာလ၏အဆုံးအားဖြင့်ရှစ်ကီလိုဂရမ်ပျမ်းမျှရရှိသူတို့ကိုအကူအညီပေးခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဒါဟာလူများကကာယဗလရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သဘောပေါက်ကြောင်းကိုပြီးနောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကာယဗလပိုကြီးတဲ့ကြွက်သားထုထည်အောင်မြင်ရန်အသုံးပြုစတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင် Oxymetholone (Anadrol) (CAS 434-07-1) ဈေးကွက်ထဲမှာအင်အားအကောင်းဆုံးပါးစပ်ဟို steroids တစ်ဦးအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်။ ဒါဟာတဦးတည်းနှစ်ကြိမ်အဖြစ်အစာရှောင်သည်အခြား steroids လုပ်နိုင်အဖြစ်ကြီးမားသောကြွက်သားတည်ဆောက်ကူညီနိုင်သည်ကိုအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်။ အန်ဒရိုဂျင်အချိုးရန်၎င်း၏ဟို 350 ဖြစ်ပါသည်: 55 ။ ဒီ Steroid တစ်မျိုးအဆိုပါကိန်းဂဏန်းများတှငျအဘယျထက်ပိုပြီးအန်ဒရိုဂျင်ကြောင်းကြောင့်ထေူနိုင်ပါတယ်အသုံးပြုသောခဲ့သူမဆိုကာယဗလမယ်။
များပြားသောလူတို့တွင်ကအတော်လေးဘုံ Steroid တစ်မျိုးစေသည်နောက်ထပ်အရာကနှုတ်ယူနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။ အဲဒါကိုက၎င်း၏ 17 အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲကြောင်းဆိုလိုတာတစ် 17aa Steroid တစ်မျိုးကြောင့်ထိုသို့ပြုth အက်တမ်ဤအရပ်မှနှုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
Oxymetholone သူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဒီမူးယစ်ဆေးဝါး testosterone ဟော်မုန်းထက်သုံးကြိမ်အားကောင်းဖြစ်ခန့်မှန်းကြောင်းအစွမ်းထက်ဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့အလွန်အမင်းထိရောက်သောဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတခုဟို Steroid တစ်မျိုးပိုအဘယ်အရာကိုလိုချင်တာလဲ?
Oxymetholone (Anadrol) လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရား
Oxymetholone အန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမြင့်မားတဲ့ဟိုရှိပါတယ်တဲ့ဒြပ် testosterone ဟော်မုန်းဆင်းသက်လာသည်။ ဒါဟာဟော်မုန်း-receptor ရှုပ်ထွေးဖွဲ့စည်းရန်တုံ့ပြန်မှုအန်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ရှူးများနှင့်အင်္ဂါများတွင် cytoplasmic testosterone ဟော်မုန်း receptors နှင့်အတူ binding အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဟော်မုန်း-receptor ရှုပ်ထွေးထို့နောက်အရှင် DNA ကိုကူးယူခြင်းနှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်၏ပေါင်းစပ်ပွောငျးလဲသော mRNA ဖွဲ့စည်းရေးမြှင့်တင် DNA ကိုအတူချည်နှောင်။
ထို့အပြင် Oxymetholone သည် erythropoiesis ကိုမြန်စေပြီးအရိုးကြွက်သားများနှင့်အရိုးများကို anabolic effect တစ်ခုသက်ရောက်စေသည်။ ထို့အပြင်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးသည်သွေးနီဥများထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည့် erythropoietin ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိနိုက်ထရိုဂျင်ချိန်ခွင်လျှာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးရေထိန်းသိမ်းမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
ကာယဗလအတွက်အတှကျအသုံးပွု Oxymetholone ကဘာလဲ?
Oxymetholone ကစားပွဲပေါ်ဖြစ်စေသောကာယဗလအကျိုးကျေးဇူးများကိုအများကြီးရှိပါတယ်။ ဤတွင်သူတို့ထဲကတချို့တွေဟာ;
ဒါဟာပရိုတိန်းပေါင်းစပ်ပိုကောင်းစေပါတယ်- ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများအတွက်အဓိကအဆောက်အဦပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကကြွက်သားကြီးထွားပရိုတိန်းပေါင်းစပ်၏ရလဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သငျသညျအထဲကအလုပ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ကြွက်သားကြီးထွားနောက်ကြောင်းပြန်ကြောင့်ကြွက်သားပရိုတိန်းပျက်ပြားရှိသေး၏။ တိုးမြှင့်ဖို့သင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေ၏အရွယ်အစားအဘို့, ခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏ပျက်ပြားထက်ပိုပရိုတိန်းပေါင်းစပ်ရှိသည်ဖို့ရှိပြီး, Oxymetholone အားဖြင့်ပရိုတင်းပေါင်းစပ်မြှင့်တင်ရန်, ပိုကြီးတဲ့ကြွက်သားတွေရဲ့ဖန်တီးမှုလည်းမရှိ။
ဒါဟာသွေးနီဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင်- သွေးနီဥများကသင်၏ကြွက်သားများကိုအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ရန်ဤအရာသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေစေပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အလွန်အကျွံပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမခံစားရဘဲကြွက်သားများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူသည်သူမတစ်ပတ်လုံးလေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူသည်ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမှအကျိုးရရှိသည်။
Anadrol နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်- ဤသည် Steroid တစ်မျိုးသင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေသိုလှောင်နိုင်သောနိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ဒီအားသာချက်ကိုပိုမိုအာဟာရအရှင်ထွက်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ဦးဆောင်သင့်ရဲ့ကြွက်သားမှကယ်နှုတ်ရလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြတ်တောက်နေချိန်မှာဒါဟာကြွက်သားထိန်းသိမ်း- ဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်တွင်သူတို့အလုပ်လုပ်သောကြွက်သားများကိုမည်သူမျှမပျောက်စေလိုပါ။ Anadrol လုပ်တယ်ဆိုတာကသူကကြွက်သားတွေကိုမဖျက်ဆီးပဲခန္ဓာကိုယ်အဆီဆဲလ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးဖျက်ဆီးတယ်။ ကြွက်သားများပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းရှိအဆီများပြိုကွဲသွားသည်နှင့်အမျှကြွက်သားများသည်ယခုအခါဖြတ်တောက်။ ပိန်သွားလိမ့်မည်။ ပိုခက်ခဲပြီးတင်းကျပ်သောကြည့်ရှုရန်အတွက် Oxymetholone (Anadrol) 434-07-1 ။
ဒါဟာအစာစားချင်စိတ်တိုးမြှင်-a ကာယဗလမယ်ကြွက်သားတည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်ဖို့ကိုယ်ခန္ဓာအဘို့ကယ်လိုရီတွေအများကြီးယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ တဦးတည်းလိုအပျသောကယ်လိုရီအတွက်ယူအစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်းခံစားနေရသည့်အခါဒါပေမယ့်ပြဿနာကလာ။ Oxymetholone သင်သည်သင်၏ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်မည်ကိုလုံလောက်သောအစာစားချင်စိတ်ကိုငါပေးမည်။
ပါဝါတံခါးခုံကိုတိုးပွါး- Anadrol, အလေးမများအတွက်အထူးသဖြင့်ကောင်းသောအသောအကျိုးကျေးဇူးကိုသင်၏အာဏာကိုတိုးမြှင့်စေမည်။
သိသိသာသာခန္ဓာကိုယ်ခွန်အား၌အသီးအနှံကိုမှဦးဆောင်- Oxymetholone အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်သင်ပိုမိုသင်သည်လက်ျာခြေရာခံအပေါ်ကျိန်းသေပါပဲပိုပြီးနှင့်ပခုံးစာနယ်ဇင်းကီထိုင်ရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုရှာကြသည်လျှင်။ ယင်း၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် Going, ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးက၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအပေါ်သို့သူတွေကိုအစွမ်းသတ္တိကိုဆူပူစေရန်သတင်းပေးပို့ထားသည်။
သိသိသာသာကြွက်သားကြီးထွားအားပေးအားမြှောက်- ကာယဗလလေ့ကျင့်သူအတော်များများသည်ကြွက်သားများရရန်ကြိုးစားသော်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ နှင့်အတူ Oxymetholoneသငျသညျအလွန်ခဲယဉ်းကြိုးစားရန်မလိုပါ။ သင်တို့သည်ဤဆေးပြားအလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက် start ပြီးတာနဲ့သင်ကဒီထက်ထက်နှစ်လအတွင်းကြွက်သားရဖို့ရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီမူးယစ်ဆေးအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုသင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေပိုကြီးလာပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသတိပွုမိစတင်ရန်ဤမျှကာလပတ်လုံးအဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုပါကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာပဲအချို့ကိုသင်ခြားနားချက်သတိထားမိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာဤအရပ်မှရလဒ်များကိုတက်အမြန်နှုန်းမြန်ဆန်စွာသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်- အကယ်၍ သင်သည်းခံရန်မကောင်းလျှင်၊ ဤ steroid သည်အချိန်တိုအတွင်းပြီးပြည့်စုံသောရလဒ်များကိုပေးသည်ကိုသင်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။ ရှစ်ပတ်မပြည့်ခင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ပန်းတိုင်များကိုပြီးမြောက်ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထွင်းထုပေးလိမ့်မည်။
စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်-ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းထက်အခြား, Anadrol တဦးတည်းစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုပေးသည်။ ရလဒ်အဖြစ်ကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများလေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများအနေဖြင့်အစာရှောင်ခြင်း recover လို့ရပါတယ်။ အကျိုးဆက်အားသူတို့ ပို. ပင်မကြာခဏခက်ခဲလေ့ကျင့်နှင့်နိုင်ပါတယ်။
အလေးချိန်အမြတ်အတွက်ကူညီပေးနေ- အကယ်၍ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝကြည့်ရှုစေလို။ ပို၍ စွဲမှတ်စေလိုလျှင်အသုံးပြုရန်စဉ်းစားသင့်သည် ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက် Oxymetholone။ လူအများအပြားက၎င်းသည်ရုတ်တရက်ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာရန်ကူညီပေးသည်ဟုအစီရင်ခံကြသည်။ ၄-၆ ပတ်အတွင်းပေါင် ၂၀ မှ ၃၀ ပေါင်ကျခြင်းသည်ဟာသမဟုတ်သကဲ့သို့ Anadrol ကလည်း၎င်းထက်ပိုမိုသောအရာများကိုပြုလုပ်ရန်သက်သေပြခဲ့သည်။
အဆိုပါလုံတိုးပွါး- သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများတွင်ပိုမိုရှည်လျားသောကာလ၌တူးဆွနိုင်ခြင်းသည်ကာယလေ့ကျင့်သူတစ် ဦး စီတောင့်တသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Oxymetholone ၏ရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့်သင်၏အစွမ်းကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုလေ့ကျင့်ရန်သင့်ခန္တာကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
အဆစ်နာ Soothes- ဒီနာကျင်မှုကမုန်းတီးစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ Anadrol ကကြွက်သားထုထည်နဲ့အားအင်တွေကိုဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လည်းအဆစ်တွေကိုအားဖြည့်ပေးပြီးအဆစ်နာကျင်မှုကိုလျှော့ချပေးတယ်။ သင်ကြိုက်သလောက်မကြာခဏအလေးမတင်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိတော့ပါ။
Oxymetholone (Anadrol) သောက်သုံးသော
Anadrol 50 ကိုသုံးရုံနဲ့သင့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေမရနိုင်ပါဘူး။ သင်အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များကိုနားလည်သဘောပေါက်လိုပါကမှန်ကန်သောဆေးသောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောဆေးသောက်ခြင်းသည်မမှန်ကန်သောသောက်သုံးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှသင့်အားအကာအကွယ်ပေးသည် Anadrol သောက်သုံးသော။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Anadrol သောက်သုံးမှုသည်လူတစ် ဦး မှတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပန်းတိုင်အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။
အချို့သောဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်မတူဘဲသင်သံသရာ၏ကွဲပြားသောအဆင့်များ၌သင်ပမာဏကိုပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်သောကြောင့် Anadrol သည်ပုံမှန်ဆေးပမာဏ ၅၀ မီလီဂရမ်ကိုနေ့စဉ်သောက်သည်။ အစပြုသူသည် ၂၅ မီလီဂရမ်မှ ၅၀ မီလီဂရမ်အထိနည်းသောဆေးဖြင့်စတင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဆေးကိုသည်းခံနိုင်လျှင်ယခုစားသုံးမှုကိုတိုးနိုင်သည်။
လူအတော်များများက ပို. ပင်သူတို့၏အစာစားချင်စိတ်ကိုတိုးပွါးစေသည်ဟုစဉ်းစားဒီမူးယစ်ဆေးအပေါ် overdose လေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤ Anadrol နှင့်အတူအမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုတခါပိုယူဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာပြောင်းပြန်အပေါ်ပြုမူ။ ဒါ့အပြင်အဲဒါကိုပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောကွောငျ့တစျဦးကဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏မြင့်မားသောသောက်သုံးသောယူတော်မမူကြောင်းအကြံပြုသည်။
သငျသညျအနညျးငယျကပိုတက်ရိုက်ကူးချင်လျှင်, သင် 100mgs ရန်သင့်သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသို့သော်သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကသည်းခံနိုင်ပါတယ်မှသာလြှငျဤအမှုကိုကြောင်းအကြံပြုသည်။ ဒီကသင်၏အသည်းအဘို့ကောင်းသောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 150mgs ကျော်လွန်တဲ့အမှားလုပ်မထားပါနဲ့။ ဒါဟာအစကသင်၏မတရားသော၏လျှော့ချရေးဦးတည်သွားစေနိုင်ကြောင်း, ဤသင်ဤအရပ်မှသင့်ရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးဟန့်တားရန်အသုံးပြုတူသောစားရန်မတတျနိုငျဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုပေသည်။
Oxymetholone (Anadrol) သံသရာနှင့် stack
Oxymetholone (Anadrol) သံသရာ
များစွာသောခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများသည်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သူတို့၏စက်ဝန်းတွင် Anadrol အသုံးပြုခြင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဤတွင်သူတို့ထဲကအများစုကိုကြိုက်တတ်တဲ့သံသရာအချို့ကိုဒီမှာ;
1 ။ အရင်ကဆိုရင်များအတွက်
ရက်သတ္တပတ် ၁ မှတစ်ပတ်မှ ၆ ရက်ကိုနေ့စဉ် Anadrol ၏ 1-6mg သောက်ပါ
ရက်သတ္တပတ်မှအပတ်က 1 တစ်ပတ်ကို testosterone Enanthate ၏ 12-300mg ကိုယူ 500- ။
ဤသည် Testosterone ဟော်မုန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလိုအပ်သောခန္ဓာဗေဒအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အလွန်မြင့်မားသောဆေးပမာဏဖြင့်စတင်အသုံးပြုသော Anadrol သံသရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Anadrol ပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးထိုးသူတစ် ဦး အစပြုသူသောက်ရန်အကြံပြုသည်။
ဒီသံသရာထဲမှာရှိနေစဉ်, ဒီ stack ရှိပါတယ်မြင့်မား estrogenic သဘောသဘာဝကြောင့် Nolvadex သို့မဟုတ်မည်သည့် aromatase inhibitor ကဲ့သို့သော SERM ကိုယူရန်အကြံပြုလိုသည်။ ငွေဖြည့်လိုသူမည်သူမဆိုအတွက်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသော Anadrol သံသရာဖြစ်သည်။
2 ။ အလယ်အလတ်အသုံးပြုသူများအတွက်
ရက်သတ္တပတ်မှ Week1 နေ့စဉ် Anadrol ၏ 6mg ကိုယူ 50- ။
ရက်သတ္တပတ်မှ Week1 Deca Durabolin (Nandrolone Decanoate) အပတ်စဉ်၏ 12mg ကိုယူ 400- ။
ဒါ့အပြင်၏ 100mg ယူ testosterone Enanthate အပတ်စဉ်။
သငျသညျသဘောပေါက်ပါပြီအဖြစ်, ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤသံသရာအတွက်အနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိပါတယ်။ ဤသည်သံသရာမူလတန်းဟိုမဟုတ်ပါဘူး, ဤအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ချက် Anadrol ကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးနေစဉ်သံသရာတစ်လျှောက်လုံးအီစထိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုတို့၏စီးပွါးကိုလျှော့ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Decad Durabolin သည် Anabrol ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါဤသံသရာတွင်အသုံးဝင်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် anabolic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ Anadrol သံသရာမှာ, ၎င်း၏သောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် 50 မီလီဂရမ်ရုံယူပြီးမှ 100-50 မီလီဂရမ်၏အကွာအဝေးမှလျှော့ချခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးကအလွန်အမင်း anabolic ဖြစ်လို့ပဲ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် Anadrol သောက်သုံးရန်မလိုအပ်ပါ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သို့မဟုတ်ခွန်အားရရှိရန်အတွက် 50mg ဆေးသောက်ခြင်းသည်အလယ်အလတ်အသုံးပြုသူအတွက်လုံလောက်သည်။
3 ။ အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်
တစ်ပတ်ကို ၁ ပတ်မှ ၈ ပတ်လျှင် ၁၀၀ ofAnadrol တစ်ပတ်လျှင်
25mg အပတ်စဉ်မှာတိုင်းအခြားနေ့က testosterone Propionate ၏ 100mg ကိုယူ
100mg အပတ်စဉ်မှာတိုင်းအခြားနေ့က 400mg Trenbolone Acetate ယူပါ။
အခြားသူများနှင့်အတူဤအဆင့်မြင့်သံသရာ၏ခြားနားချက်ကတိုတောင်းကာလကြာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာအစ Trenbolone Acetate နှင့် testosterone Propionate တူသောအတို Ester ဖြစ်ကြောင်း steroids ပါဝငျသညျ။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုခြောက်ပတ်မှကန့်သတ်သည်, ပြုလုပ်မှုကြောင့်တစ်နေ့လျှင် 100mg ၏မြင့်သောက်သုံးသောမှအဓိကအားဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုတိုးချဲ့ကာလအတွက်အသုံးပြုရန်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။
မြင့်မားသော Anadrol သောက်သုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာ၎င်းသည် Trenbolone Acetate နှင့်တွဲဆက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်ထူးခြားသောခွန်အားနှင့်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Anadrol 50 သည်မြင့်မားသောဘက်စုံသုံးမှုကိုပေးပြီးသင်က၎င်းကိုကိုယ်ပိုင်သုံးရန်သို့မဟုတ်အခြား steroids များနှင့်အတူတကွထားရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
တစ်ဦး Anadrol သာသံသရာ- ဒီသံသရာအတူ, သငျသညျအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်များပါတယ်။ သငျသညျသီးနှံများကိုပုံမှဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်နေစဉ်ကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတိုးမြှင့်ရှောင်ရှားရန်သင်နှင့်အတူကြောင့်သီးနှံများကိုပုံဟာ steroids ရွေးချယ်ဖို့ကောင်းလှ၏။ သငျသညျဖြစ်နိုင်သောအလုံခြုံဆုံးလမ်းအတွက် stacking စိတ်ဝင်စားရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒီမှာသင်လုပ်နိုင်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်;
ပျော့ဟိုကိုသုံးပါဖွစျပွီးသငျသညျ SARMS, Equipoise, Primobolan နှင့် Deca Durabolin တူသောပျော့ဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူကသီးနှံများကိုပုံကြောင်းကောင်းလှ၏။
အလွန်မြင့်မား doses- မှာအန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်နှင့်အတူကသီးနှံများကိုပုံမနေပါနဲ့၎င်းကို Testosterone သို့မဟုတ် Trenbolone ကဲ့သို့သော steroids များနှင့်သိုလှောင်ထားပါကသင်သည် 200mg ထက်ကျော်လွန်သော Anadrol သောက်သုံးမှုကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။
DHT အနကျအဓိပ်ပါယျအတူက stacking ရှောင်ကြဉ်ပါ- Masteron နှင့် Winstrol တူသော steroids နှင့်အတူ Anadrol Stacking ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးပြုလိမ့်မည်။ သင်လိုချင်သောအကျိုးအမြတ်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်နှင့်တကွကြွလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမခံနိုင်သောဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ Winstrol နှင့်အတူ stacked ရှိရာကိစ္စများတွင်ပြင်းထန်သောဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုအစီရင်ခံစာများရှိခဲ့သည်။
အသည်းအပေါ်ထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခြား steroids အတူက stacking ရှောင်ကြဉ်ပါ-သူတို့အသားဝါတူသောအသည်းပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ခံတွင်း steroids နှင့်အတူ stacking ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကြာရှည်စွာအဘို့အသီးနှံများကိုပုံမနေပါနဲ့-stacking များအတွက်ပျမ်းမျှအချိန်လေးပတ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, သင်ယူသောက်သုံးသောအဆိုပါအသုံးပြုမှု၏အချိန်ကြာကြာနှင့်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းသတိပြုပါရန်ကောင်းလှ၏, အပိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပြင်းထန်ဖြစ်လာသည်။
ထို့ကြောင့်သင်သည်မည်သည့်ဆေးဝါးကိုမဆိုအလွဲသုံးစားမပြုဘဲ Oxymetholone ဆေးကိုပညာရှိစွာယူသင့်သည်။
Anadrol သည်စျေးကွက်တွင်အင်အားအကောင်းဆုံး anabolic steroids တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော Post-cycle ကုထုံးရှိသည်။ ဤအရာသည်သင်၏အကျိုးအမြတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။ သံသရာပြီးတဲ့အခါသင်ရရှိခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတာကမမျှတဘူးလား။ ထို့အပြင် PCT သည် Testosterone ထုတ်လုပ်မှုကိုဖိနှိပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အားကူညီသည်။
Anadrol ဟာအလွန်တိုတောင်းသောဝက်ဘဝရှိပြီးအတို Ester ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကသငျသညျသုံးရကျသငျသညျတစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုခဲ့ကြပါလျှင်သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးထိုးတာပြီးနောက်သင့်ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုစတင်သင့်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးရှည်လျားသော Ester ကြောင်းဆို Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူက stacking ခဲ့ကြသည်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးထိုးတာပြီးနောက်ရာခိုင်နှုန်း 14-18 ရက်ပေါင်း start သငျ့သညျ။ Nolvadex သို့မဟုတ် Clomid သင့်ရဲ့ Kickstarter သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏သဘာဝထုတ်လုပ်မှုကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ဤတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူမယ့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်;
ရက်သတ္တပတ် Nolvadex / တစ်နေ့လျှင် တစ်နေ့လျှင် Clomid
Oxymetholone (Anadrol) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
အဆိုပါ Anadrol ရလဒ်များကို ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ရံမှာသူတို့ကမနှစ်မြို့ဖွယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့လာနိုင်တယ်။ Anadrol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအများစုသည်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးသင်သူတို့ကိုသင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။
လည်ချောင်း, လျှာ, နှုတ်ခမ်းနှင့်မျက်နှာရောင်ရမ်းခြင်း
ရေရှည်အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်သည့် Anadrol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာသရက်ရွက် (သို့မဟုတ်) အသည်း၌သွေးဖြူများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသည်းအကျိတ်များကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သွေးထွက် (သွေးထွက်သွားဖုံးသို့မဟုတ်နှာခေါင်းသွေးထွက်) သို့မဟုတ်လွယ်ကူသောကွိတျ, ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲသွေးထွက်
Oxymetholone ကိုအသုံးပြုသောအမျိုးသမီးများသည်ပုလ်အင်္ဂါလက္ခဏာများဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်သဖြင့်၎င်းတို့ပေါ်ပေါက်သည်နှင့်၎င်းကိုရပ်ဆိုင်းသင့်သည်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်၏အကြံဥာဏ်ကိုရယူသင့်သည်။ သူတို့ပါဝင်သည်;
ယူလုံခြုံ Oxymetholone (Anadrol) လား?
Anadrol လုံခြုံပါသလား ဤမေးခွန်းသည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန်စိတ် ၀ င်စားသူများစွာ၏စိတ်ကိုနှေးကွေးစေသည်။ Anadrol 50 ကိုမှန်ကန်စွာသောက်လျှင်အန္တရာယ်ကင်းသည်၊ သို့သော်အောက်ပါအခြေအနေတစ်ခုခုမှသင်ခံစားနေရလျှင်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ချေ။
သငျသညျ Jantoven, Coumadin, warfarin ကဲ့သို့အမူးယစ်ဆေးဝါးများ thinning ဆိုအသွေးတော်ပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်
သင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် Anadrol သည်သင့်အတွက်လုံခြုံမှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်သင်၏မမွေးသေးသောကလေးအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးမွေးရာပါချို့ယွင်းချက်များကိုပင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤဆေးကိုသင်သုံးစွဲနေစဉ်ကိုယ်ဝန်ရှိပါကဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။ ဤမူးယစ်ဆေးကိုသုံးနေစဉ်အတွင်းထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့်သန္ဓေတားဆေးကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။
ဤသည်ဆေးဝါးအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးအတှကျကလေးမွေးဖွားပြောင်းလဲနိုင်ပြီး, ဒါကြောင့်, သတိတွေအများကြီးနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။
ကရင်သားနို့မှတစ်ဆင့်တစ်နို့တိုက်ကလေးလွန်နေသည်ရှိမရှိအပေါ်လေ့လာရေးသေးပြုမိကြပြီမဟုတ်, ထိုသို့မဆိုထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းလျှင်မသိရသည်။ သင့်ရဲ့အနညျးငယျတစျဦးနို့ကဒီဆေးကိုရှောင်ပါသုံးနေစဉ်။
ယ်ယူရန် Anadrol ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှအပ်ရ။ ဒီနေရာတွင်ကျွန်တော်တို့ဆီကအမိန့်ကိုဘယ်လိုဖွင့်,
သငျသညျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်ကတဆင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်, အွန်လိုင်း Skype ကိုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်ကစုံစမ်းရေးကော်မရှင်စနစ်ကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ပိုကောင်းသငျသညျအစေခံဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable လုပ်ဖို့, အမိန့်, ဆိုလိုသည်မှာ, သင့်လိပ်စာနှင့်သငျသညျယ်ယူချင်သောအရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်. အားလုံးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်ကိုပြန်သငျသညျရနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်, quotation အများနှင့်ငွေပေးချေမှုစည်းကမ်းချက်များကိုခြေရာခံပို့ဆောင်နည်းလမ်းတွေ, ခန့်မှန်းခြေဆိုက်ရောက်နေ့စွဲ (ETA), အတူသင်တို့သည်မည်ဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏အမိန့်များအတွက်ပေးဆောင်ကြပြီးတာနဲ့ကုန်ပစ္စည်း (ဤတစ်ဆယ်ကီလိုဂရမ်အထက်ကြောင်းဆိုအမိန့်အဘို့ဖြစ်၏) နောကျတဆယျ့နှစျနာရီအတှငျးသင်တို့ဆီသို့စေလွှတ်။
Oxymetholone (Anadrol) တရားမဝင်လား?
Oxymetholone ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် ၀ ယ်ခြင်း၏တရားဝင်မှုသည်တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ယူကေ၊ ကနေဒါနှင့်အမေရိကန်တို့တွင်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကိုခွင့်ပြုသော်လည်းတရားမ ၀ င်လူကုန်ကူးခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ ပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်၊ သင်၏တိုင်းပြည်က Anadrol အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုမပြုစစ်ဆေးပါ။
ငါ Oxymetholone (Anadrol) အဘယ်မှာရနိုင်မလဲ?
သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံအဖြစ် ကာယဗလသင်သည်သင်၏ကြွက်သားတိုးတက်မှု၏ဒီဂရီကျေနပ်မဟုတျကွောငျးအထဲကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တောင်မှသင်သည်တတ်နိုင်သမျှသောအကျင့်ကိုကျင့်သောနောက်, သင်ဖြစ်ချင်တယ်ဘယ်မှာမှမရကြဘူးကြောင်းသတိပြုမိဖို့စိတ်ပျက်ရပေမည်။ အခြားအအခါသမယတွင်, သငျသညျအဆီတွေအများကြီးသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်ဆောက်ရှိကွောငျးသတိထားမိပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောအဆီသင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေလွှဲမည်, သင်အားလုံးဆူဖြိုးရှာဖွေနေကိုယ့်ကိုကိုယ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်လာမည့်အဘယ်အရာကိုအံ့သြသည့်အခါတက်အလေးပေးရကြပါဘူး။ သင်သည်သင်၏ကြွက်သားတည်ဆောက်မယ့်နည်းလမ်းများအတွက်အားကစားရုံမှာလူတိုင်းကိုမေးခဲ့သည့်အခါနေ့ရက်များရှည်လျားသွားပြီနေကြသည်။ ယနေ့ခေတ်, သင်အင်တာနက်အပေါ်ကိုရယူရန်, နှင့်သင်အွန်လိုင်း steroids ရောင်းသမျှသောဆိုဒ်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သင်မည်သို့ထံမှမဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံး site ကိုသိရန်ရပါသလဲ?
သင်ဝယ်ယူသည့်မည်သည့် steroid ကဲ့သို့မဆိုသင်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်တစ်ခုမှ Anadrol 50 ကိုသင်ဝယ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အဲဒီမှာသင်ဟာအကောင်းဆုံး Oxymetholone စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးကိုသင်ရတော့မယ်ဆိုတာသေချာနိုင်ပါတယ်။ ရောင်းချသူများ၏အမည်တွင်အင်တာနက်တွင်လိမ်လည်သူများစွာရှိခြင်းကြောင့်သင်ကအတုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစတီရွိုက်များကိုရောင်းချသောဆိုဒ်များအတွက်သင်ကျရောက်လိမ့်မည်။ အချို့သော anabolic steroids သည်မည်သည့်စစ်မှန်သောအာမခံချက်မျှမရနိုင်ပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ရလဒ်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက် Oxymetholone အစစ်အမှန်သည်ကမ္ဘာနှစ်ခုနှင့်တူပြီးဤစတီရွိုက်ကိုသင်စတင်အသုံးပြုသည်နှင့်ထိုအတိုင်းဖြစ်သင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site AASraw.com တွင်သင်သည်စင်ကြယ်။ သန့်ရှင်းသော Anadrol ကိုသင်တတ်နိုင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ oxymetholone စျေးနှုန်းသည်အိတ်ဆောင်နှင့်အဆင်ပြေသည်။ ၎င်း၏တရားဝင်မှုဖြင့်သင်သည်ကောင်းမွန်သော Anadrol ရလဒ်များနှင့်အနိမ့်ဆုံး Anadrol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရရှိလိမ့်မည်ဟုသင်စိတ်ချပါသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ထံမှာယူပြီးသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်လိုချင်သောအရာသို့ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။
Saartok T, Dahlberg E, Gustafsson JA (၁၉၈၄) ။ "anabolic-androgenic steroids များ၏နှိုင်းယှဉ်စည်းနှောင်မှု - အရိုးကြွက်သားများနှင့်ဆီးကြိတ်များတွင် androgen receptors နှင့်လိင်ဟော်မုန်းနှင့်ဆက်စပ်သော globulin နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း" ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်. 114(6): 2100-6 ။
Pavlatos လေး, Fultz O, Monberg MJ, Vootkur A, Pharmd (2001) ။ "oxymetholone ၏သုံးသပ်ချက်ကို: တစ် 17alpha-alkylated anabolic-androgenic steroid" ။ Clin Ther. 23(6): 789-801 ။
Zderic ဂျွန် A ။ ; Carpio, Humberto; Ringold, HJ (ဇန်နဝါရီလ 1959) ။ "Steroid မွှား။ CVI ။ 7β-Methyl ဟော်မုန်း analog ၏ပေါင်းစပ် "။ အမေရိကန်ဓာတု Society ၏ဂျာနယ်. 81(2): 432-436 ။
17842 Views စာ
သင်ကရောင်းရန် Dianabol Powder အကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံးကို သငျသညျယ်ယူရန် Winstrol အွန်လိုင်းခင်မှာကိုသိရန်လိုအပ်ထိပ်တန်း 15 Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများ